Kies ama Key dareen Easy System waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyo software ah Samsung in lagu isticmaalo si loo hubiyo in ay smartphone Samsung uu dhawaan soo bandhigay iyo daaqadaha ama Mac PC ayaa xidhiidh la samayn karaa oo kale in si fudud. Xiriir USB ayaa waxaa inta badan loo isticmaalaa in la hubiyo in xiriir waa guul iyo user wuxuu sidoo kale hubin karaa in in Kies ku xiran tahay in ay PC ka badan ka qalab Wi-Fi kaas oo ah arrin taas oo lagu taageeray by qalabka Samsung qaar ka mid ah la qoraalkii ugu dambeeyey ee android.
Download iyo rakibi Samsung Kies
Waa tallaabada ugu horraysa in user a raaco waa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in hannaanka horumarka sidii aan Rakibidda Saxda ah user ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan alaabta ku jiro xaalad fiican ee ugu macquulsan. Version ugu dambeeyay waxaa laga heli karaa halkan iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in si gaar ah link tani waxaa had iyo jeer soo booqday sida ay website-ka rasmiga ah ee Samsung Inc. oo ay hubiyaan in version Kies xaadirka on this link waxaa mar walba joogta ah loo cusboonaysiiyo si ay sameeyaan user marnaba ayaa ka fool arrin kasta oo la xiriirta waafaqsan. Tallaabada ay talaabo kaliya ku xiran tahay qasabno ah oo la raaco si aad u hesho barnaamijka si fudud ku rakiban. Bogga eegi doonaa sida wax dhejiyo hoos ku qoran:
Dhammaan xogta iyo isticmaali Kies kaabta
Habka in gurmad xogta ayaa lagu sharaxayaa sida under:
1. Marka Kies ayaa lagu xiraa link ku xusan waa in la ordi si interface ugu weyn ee u muuqataa. Qalabka ayaa sidoo kale in lagugu xiro PC si loo hubiyo in ay u muuqato ee guddiga bidix ee barnaamijka:
2. dejinta / tab dhoofiyo ayaa markaas waa in la riixi si loo hubiyo in shaashadda soo socda u muuqataa,
3. dhoofinta inay tab PC ka dibna in la riixi kulankii doorasho kasta oo la heli karo waa:
4. files ayaa markaa waa in la badbaadiyey nidaamka iyo tan ayaa sidoo kale dhameystiray habka xogta gurmad ee buuxa:
Kaabta dhammaan xogta la isticmaalayo Wondershare MobileGo
Wondershare MobileGo waa mid ka mid ah barnaamijyada in loo ogol yahay dadka isticmaala si aad u hesho wax ku sameeyo hab fudud oo degdeg badan kuwa. Muuqaaladan in ay gundhig gudahood barnaamijka waa kala duwan iyo sababo isku mid ah u tahay in la xuso in user karo hawlaha kala duwan iyadoo la isticmaalayo barnaamijka fudud oo toos ah. Si aad u dhigay abbaaro barnaamijka waa mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee barnaamijka Kies iyo xaaladaha qaarkood awooda barnaamijka dhaafa ka shaqeynayaan ee Kies taas oo ka dhigaysa in ay doorashada ka sii fiican u isticmaala badan. Si gurmad Samsung ama qalab kale Mobile kasta waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa la socda habka lagu sharaxay si natiijada yahay oo waafaqsan shuruudaha user:
Waa warbaahinta awood badan software maamulka android iyo sidoo kale macruufka.
Xidhmada waxaa ku qalab lagama maarmaan ah inuu xaqiijiyo in maaraynta content ma adag tahay oo dhan.
Shaqooyinka sare u ogolaan user inuu ka soo kabsado xogta fudayd iyo qanacsanaan
The app MobileGo hubiyaa in telefoonada macruufka iyo Android ku salaysan yihiin filaayo in habka ugu fiican.
1. Marka MobileGo Wondershare ayaa lagala soo bixi oo lagu rakibay waa in la bilaabay si shaashadda weyn u muuqataa. Qalabka android sidoo kale waa in lagugu xiro PC si ay barnaamijka waxa lagu ogaadaa. Marka la sameeyo user u baahan yahay si loo hubiyo in mid ka mid click gurmad doorasho la doorto:
2. On the qalab gurmad yar oo uu soo furay in ka dib markii uu yeelanayo dhammaan waxyaabaha la doortay by default iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in ay ka kooban ku haboon ayaa la hubinayaa kuwaas oo muhiim u ah abuurista gurmad. Waxaa sidoo kale la hubiyo in barnaamijka ay maamushaa oo waafaqsan shuruudaha user:
3. waxyaabaha waxaa badbaadiyey meesha C: \_ Users \_ Maamulaha \_ My Documents \_ Wondershare \_ MobileGo \_ kaabta oo waa la bedeli karaa by user sida looga baahan yahay in uu jecel yahay iyo. Qalabka marna si ineysan mar habka gurmad bilaabo. Marka badhanka gurmad la isku soo riixayo habka uu dhamaado iyo inta kale oo dhan waa la sameeyo barnaamij laftiisa:
Sidee si ay kor firmware la Samsung Kies
Waa habka aad u fudud oo si sahlan taas oo u baahan oo kaliya rakibo ee Kies. Waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka ayaa la soo sharxay in aad faahfaahin buuxda oo uu weheliyo, by Screenshot hoos ku qoran si aad u hubiso in user ayaa wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira:
1. Kies software waa in la bilaabay on PC iyo qalabka waa in lagugu xiro si ay barnaamijka waxa lagu ogaadaa. Wixii firmware cusboonaynta waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso xiriir USB ah sida xidhiidhada Wi-Fi ma taageersana. The button Hagaaji firmware waa in markaas la adkeeyey,
2. macluumaadka ku yaal bogga soo socda waa in la akhriyo iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in sanduuqa ku habboon sida ka muujinayaa shaashadda hoose waxaa lagu baaro si loo hubiyo in hannaanka horumarka. User ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in button bilowday hagaajinta waxa loo riixi:
3. Barnaamijka waxaa si toos ah u soo bixi doonaa qaybaha loogu baahan yahay casriyayn ah:
4. hagaajinta ama habka xudunta u bilaabi doona sida ugu dhakhsaha badan ka kooban firmware waxaa si buuxda u soo bixi. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in qalabka marnaba muhu ka PC ilaa habka aan la gaaray:
Cusboonaysii Samsung la Oden
Samsung Oden waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu awooda badan oo la hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo la telefoonada oo ay tahay in la casriyeeyay. Qalab ka faa'iideysan kartaa wax badan, haddii ay tahay in ay gacanta midig laakiin haddii ay ku gacmo khalad ah ka dibna waxa aad u muhiim ah in la ogaado in aysan kaliya telefoonka baabbi'in doonaa, laakiin gobolka ee telefoonka jeedin doonaa wax waa irrecoverable. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka article ugu wanaagsan ee laga helo internetka waxa uu ku yaalaa in la akhriyo waa in dhammaan dadka isticmaala kuwa doonaya in ay helaan Oden u ah casriyaynta firmware.
Muhiimadda hagaajinta firmware
Waxaa aad muhiim u casriyeeyo firmware qalab Samsung ah sida Manfaco badan waxaa la casriyayn ee arrintan la xiriira. Ma siyaadiyo waxtarka hawl qalabka laakiin sidoo kale waxa ay la jaan qaada farsamooyinka ugu dambeeya iyo isbeddellada in lagu bilaabay. Casriyayn firmware sidoo kale u ogolaataa qalabka in ay ka shaqeeyaan in sida uga wanaagsan ee suurtagalka ah iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale wuxuu diyaariyaa cayayaanka ee sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Arimaha gaar ahaan in ay yihiin user wajiga ayaa sidoo kale ka hadlay in hagaajinta kasta firmware taas oo sidoo kale faaiido dheeraad ah.
> Resource > Android > Sida loo Isticmaalo Samsung Kies si aad u cusboonaysiiso Samsung casriga